मनाङको चामेमा एमाले विजयी, कहाँ कसको अग्रता ? - Karobar National Economic Daily
मनाङको चामेमा एमाले विजयी, कहाँ कसको अग्रता ?
query_builderMay 15, 2017 8:01 AM supervisor_accountकारोबार visibility4043
मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकामा मतदान गर्दै मतदाता । तस्बिर: रासस
मनाङ: मनाङको चामे गाउँपालिकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विजयी भएको छ।
सोमबार बिहान सम्पन्न मतगणनामा एमाले उम्मेदवार लोकेन्द्रबहादुर घले २१४ मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। घलेले कांग्रेसकी अनिता लामालाई ३१ मतले पराजित गरेका छन्।
लामाले १७३ मत ल्याएकी छन्। आइतबार भएको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको चामे पहिलो स्थानीय तह हो।
त्यसैगरी ललितपुरको महांकाल नगरपालिका वडा नं ६ मा एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेद्वार रामकृष्ण आचार्य ३६१ मत पाएर विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका बाबुलाल श्रेष्ठले २७३ मत ल्याएका छन् ।
त्यसैगरी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी, हिमा, कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा मतगणना सुरु हुँदा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिकाको एक नम्बर वडाबाट मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव न्यौपानेले बताए ।
त्यसैगरी हिजो राति सुरु ललितपुर महानगरको मतगणना वडा नम्बर १ बाट जारी छ । अहिले त्यहाँ ७७५ मत गनिएको छ।
मेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिकाजी महर्जन २१८ मत ल्याएर अगाडि छन् । एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले १८४ मत ल्याएका छन्। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दिनेश महर्जनले ८३ मत ल्याएका छन्।
पहिलो चरणमा ११२ मतगणना गरिएको उनले जानकारी दिए। त्यहाँ कांग्रेस प्रमुखका उम्मेदवार कान्तिका सेजुवालले ६६, उपप्रमुख जगतबहादुर खत्रीले ५३, नेकपा(माओवादी केन्द्र) का प्रमुखका उम्मेदवार अशोक श्रेष्ठले २८ र उपप्रमुख अप्सरा ज्यौपानेले ३० मत र नेकपा (एमाले) प्रमुखका उम्मेदवार शान्तिलाल महतले १०, उपप्रमुख मेनका रेग्मी चौलागाईंले आठ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले बताए ।
काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरलिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ । कीर्तिपुर वडा नम्बर १ को मत गणना गर्दा एमालेले ४ सय ६०, कांग्रेसले ३ सय ५६ र माओवादी केन्द्रले १ सय ४५ मत ल्याएका छन् ।
मध्यराति १२ बजेदेखि यहाँ मतगणना सुरु भएको हो । कीर्तिपुर नगरपालिकामा एमालेबाट रमेश महर्जन, कांग्रेसबाट राजकुमार नकर्मी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हिराबहादुर महर्जन मेयरका दावेदार छन् ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ। आइतबार रातिबाट सुरु भएको मतगणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्।
सोमबार बिहानसम्म भएको मत गणनामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले ३३१ मत पाएका छन् भने कांग्रेसका उम्मेदवारले २९३ मत लिएका छन्। तेस्रो का एमाले उम्मेदवारले १०६ मत पाएका छन्।
नवलपरासीका तीनमध्ये दुईमा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । आइतबारको मतदानपछि रातिबाटै सुरु मतगणनामा नवलपरासीको देउचुली नगरपालिकामा अहिलेसम्म ४९९ मत ल्याएर कांग्रेसले अग्रता लिएको छ ।
एमालेले ४२९ मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै माओवादीको २६२ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा छ। गैँडाकोट नगरपालिकामा पनि कांग्रेसको अग्रता छ। कांग्रेसको २५४ मत, एमालेको ५६ र माओवादीको २४ मत आएको छ।
नवलपरासीको मध्येविन्दु नगरपालिकामा भने एमाले अघि छ। एमालेले १६१ मत ल्याउँदा कांग्रेसले ११८ ल्याएको छ। यहाँ पनि माओवादी २० मतले तेस्रो स्थानमा छ।
रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। सोमबार बिहानसम्म कांग्रेसका उम्मेद्वारले ३९७ मत ल्याएका छन् । माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले २२७ मत ल्याएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वारले ९६ मत ल्याएका छन्। मतगणना जारी छ।
नुवाकोटको तादी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । तादी गाउँपालिकको वडा नम्बर १ को मतगणना जारी छ ।
अहिलेसम्म ८ सय २३ मत गनेकोमा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्षका उम्मेद्वार नारायणप्रसाद पाण्डेले ३ सय ४८, नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्वार केपी लामिछानेले २ सय ८५ र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका उम्मेद्वार मानसिंह तामाङ १ सय ५४ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को मतगणना जारी छ । २ सय ८७ मत गन्दा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार सन्जु पण्डितले १ सय ५०, नेपाली कांग्रेसका मेयरका ध्रुव अधिकारीले १०७ मत ल्याएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका लिलानाथ न्यौपानेले १४ मत ल्याएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन मनाङ